घरबेटीले कोठाबाट निकाले,छोरीले यस्तो अवस्थामा बाबुलाई बाटो मै छोडिन् - ABNews Nepal
घरबेटीले कोठाबाट निकाले,छोरीले यस्तो अवस्थामा बाबुलाई बाटो मै छोडिन्
Feb 14, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, headline nepal, latest ramailo samachar, taja khabar nepal
सुन्तली गुरुङ उनि ४२ बर्सकी भइन । उनले आफ्नो बुबालाई कोठामा लगेकी छैनन। उनी भन्छिन बुबा हिंड्न् सक्नु हुन्न म पनि बोकेर लान सक्दिन अझ घरबेटी घर फोहोर हुन्छ भन्छ छि छि दुर दुर मात्र गर्छन। एकदमै गार्हो छ भन्दै आफ्नो ब्यथा सुनाउछिन।
सानो कोठा लिएको छ। चर्पी पनि जान सक्नु हुन्न ।मैले पनि कतै काम पाए भने काममा हिड्न पर्छ । उहाँ लाई हेर्दिने मान्छे पनि हुन्नन भन्दै आफ्नो दु: ख ब्यक्त गर्छिन । आफ्नी आमालाई चै छोरी लिएर गएको उनी बताउछिनl
अहिले कोठामा चै म छोरो अनि बुबा रहेको उनी बताउछिन। छोरी सङग नबस्ने भन्दा भक्कानिदै केही बोल्न नसकेका उनी अँखा देख्दैनन, हिंड्न पनि सक्दैनन , आफू कामम जानू पर्ने र चर्पी लाने मान्छे नहुदा मैले बाध्यता ले कोठामा लनगेको भन्दै आफ्नो ब्यथा सुनाउछिन।
तपाइको श्रीमान् खै भन्ने प्रश्न उनी भन्छिन” श्रीमान् त्यो बुबालाई हेरचाह नगर आइज सङै बसम तर म भन्छु मेरो बुबालाइ छडी बस्न सक्दिन” यहि हुदा श्रीमान् सङ नबसेको १८ बर्ष भयो।
हेर्नुस भिडियो :- https://youtu.be/lmNvD9f6ipI
एजेन्सी । प्रत्येक हप्ता, बी टाउनका धेरै ठूला सेलिब्रेटीहरू द कपिल शर्मा शोमा भाग लिन जान्छन् । उनीहरुले आफ्नो फिल्मको प्रमोशन गर्छन । तर कपिलको कृयाकलापका कारण केही कलाकारहरुले उनको शो वहिष्कार गरेका छन् । भर्खरै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग लिएको अन्तरवार्तालाई मजाक बनाएपछि उनीसंग अक्षय कुमार रिसाए । उनले कपिल शर्माको शो वहिष्कार गरिदिए ।
उनी मात्र होइन अमिर खान, क्रिकेटर महेन्द्रसिंग धोनी लगायतले पनि शो वहिष्कार गरेका छन् । तर बलिउडकी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भने कपिलको शो मा पुगेकी छन् । माधुरीलाई देखेर कपिलले उनीसँग पनि फ्लर्ट गरेको देखिन्छन् ।
कपिलको शोमा माधुरी फिल्मी शैलीमा प्रवेश गरिन्
कपिल शर्माको शोमा माधुरीको प्रवेश निकै फिल्मी शैलीमा हुनेछ । माधुरीको एन्ट्रीमा ‘पहला–पहला प्यार है’ गीत बज्नेछ र कपिलले अभिनेत्रीको हात समातेर उनलाई स्टेजमा ल्याउनेछन् । कपिलले माधुरीलाई भने( माधुरी मैडमको क्रेज सधैं शीर्षमा रहेको छ। कपिल भन्छन्– कलेजमा केटाको खल्तीमा पैसा होस् या नहोस्, माधुरीको फोटो पक्कै हुन्थ्यो। यो सुनेर माधुरी हाँस्न थाल्छिन् ।
सोही क्रममा कपिलले माधुरीसँग शोमा आएका सञ्जय कपूरलाई सोध्छन्, वर्षौंमा माधुरी दीक्षितमा के परिवर्तन आएको छ ? यसबारे सञ्जय कपूर भन्छन्– उनी अहिले पहिलेभन्दा धेरै सुन्दर भएकी छिन् । यसैमा कपिलले माधुरीलाई भने( तपाईलाई कस्तो लाग्छ जब तपाईको वरपरका सबैले तपाईसँग फ्लर्ट गर्छन् ? त्यसपछि माधुरी भन्छिन्– डाक्टर नेने (उनका श्रीमान) लाई मिस गर्छु । माधुरीको जवाफ सुनेर कपिलको बोली बन्द भयो ।
कार्यक्रममा कृष्णा अभिषेक ज्याकी श्राफको लुक्समा देखिनेछन् भने चन्दन प्रभाकरले देवदास फिल्मका शाहरुख खानको भूमिकामा फ्यानलाई मनोरञ्जन दिनेछन् । कपिलको शोमा माधुरी दीक्षितले पनि उनको सबैभन्दा लोकप्रिय गीत ढोला रे ढोला रे।।।मा नृत्य गर्नेछिन्। समग्रमा, शोको आगामी एपिसोड एकदमै धमाकेदार र मनोरञ्जनात्मक हुनेछ।
‘द फेम गेम’ फेब्रुअरी २५ मा रिलिज हुँदैछ
माधुरी दीक्षितको सिरिज द फेम गेमको बारेमा कुरा गर्दा, यो फेब्रुअरी २५ मा नेटफ्लिक्समा रिलिज हुनेछ। यस सिरिजमा माधुरीसँगै मानव कौल, सञ्जय कपूरलगायत धेरै ठूला कलाकार मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् । सिरिजको ट्रेलर निकै बलियो छ । फ्यानहरु अहिले यो सिरिजको रिलिजको प्रतिक्षामा छन् । द फेम गेमलाई दर्शकले कस्तो प्रतिक्रिया पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।